Talooyinka ugu wanaagsan ee kor u kaca
Oxyl ama oxalis (laga bilaabo Laatiinka Oxalis - "dhanaan") ayaa iska leh caanaha sanadlaha iyo xeryaha qoyan ee qoyska. Waxaa lagu koray hawada furan, laakiin oksijiinka ayaa dan gaar ah ku leh guriga. Waxay u muuqataa weyn sida qurxinta, thanks to ma aha oo kaliya ubax qurux badan, laakiin sidoo kale aan caadi ahayn, caleemo qalafsan.
Canaansi waa geedo kulul oo dabiici ah oo ku dhasha meelo badan oo ku yaalla Koonfurta Ameerika. In Europe, waxay bilaabeen inay koraan oo lagu koriyo, abuurista xaaladaha cimilada lagama maarmaanka ah. Laakiin dadaal yar, kalluunka sii kordhaya ayaa laga qaban karaa xitaa guriga. Iyo ka dib markii muddo ah this warshad xiiso leh ayaa na yaabi doonaa muuqaalkiisa iyo miraha.
Hababka loo bixiyay khudaarta maareynta cayayaanka
Dalagyada dalaggu ku dhaco abaartu waxay inta badan la xiriirtaa xaaladaha cimilada xun ee xilliga ubaxooda. Si kastaba ha noqotee, tani ma aha dhammaan qodobada saameynaya midhaha geedaha khudaarta. Marar badan waxay u nugul yahiin cudurrada waxayna ku dhaawacmaan cayayaanka. Sida loola tacaalo cayayaanka khudaarta, waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan.
Portulac: Talooyin ku saabsan abuurista iyo daryeelka ee bannaanka u furan
Waxaad ka fekereysaa sida loo qurxiyo sariirta ubaxaada soo socda! Ka taxaddar raad raac. Caleemaha dhirta waxay leeyihiin caleemo ciriiri ah, isdhex gashan, daboolaan dhulka si fiican, iyo midabyo kala duwan (casaan, cadaan, casaan, oranji, dhar guduudan) wuxuu abuuraa shucuur badan. Intaa waxaa dheer, dhirta uma baahna waqti badan oo lagu daryeelo.
Waxyaabaha iyo siyaabaha loola dagaallamo cayayaanka strawberry
Ka hor inta beeritaanka strawberries, waxaa lagama maarmaan ah in aad la tashato dhammaan cayayaanka in ay cuni karaan berry. Tani waxay gacan ka geysan doontaa inay fuliso tallaabooyin ka hortag ah oo wax ku ool ah iyo waqtigeeda waxayna hubin doonaan dhalidda ugu badan. Ticks Tixgeli noocyada kalluunka ee laga arki karo beerta, sifooyinka muhiimka ah ee go'aamiya cayayaanka on strawberries, iyo hababka ay u maareeyaan.
Freesia: sharaxaad, haboon iyo daryeel
Waxa kaliya ee xayndaabtu aanay ka helin dadka ku tilmaamaya carafka freesia. Hase yeeshe, mar kasta oo ay helaan gundhiga. Sababtoo ah ma jiraan ereyo noocaas ah. Maqaalka, waa suurtagal in la gudbiyo caraf udgooni, laakiin sharaxaadda ubaxa, sharciyada beerto iyo jilitaanka badan ee daryeelidda waxay kaa caawin doontaa inaad ku koraan ubaxyo freesia, iyo sidan ay sida dhan u eegto dhaqanka.
Waxyaabaha iyo siyaabaha loola dagaallamo cayayaanka carrada
Karootada waa biennial (dhif ah hal iyo-perennial) dhirta ka soo qoyska Umbrella, samaynta sanadka ugu horeeya ee nolosha a rosette ah ee caleemaha iyo xididdada, iyo labaad, geedka abuur iyo abuur. Waxaa loo qaybiyaa adduunka oo idil, oo ay ka mid yihiin wadamada gobolka Mediterranean, Afrika, Australia. Beeraha, karootiga waxaa lagu beeraa inta badan.
In dabiiciga ah, ma jiraan wax cayayaanka ah oo digaag ku keli ah, laakiin waxaa jira liis cajiib ah ee cayayaanka kuwaas oo doorbida in ay degaan dhirta qoyskan: dhir, karootada, celery, iyo kuwa kale. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira cayayaanka noocan ah, taas oo, xulashooyinka kale, door bidaan dhirta gaarka ah, sidaas darteed waxaa loo yaqaannaa cayayaanka ee dill.
Haddii gaabniyadii hore lagu koray qiyaasta warshadaha oo si gaar ah loogu talogalay quudinta xoolaha, maanta, oo ay uga mahad celinayaan taranka, beeraha waxaa sidoo kale lagu beeray cunto. Kuwa ugu muhiimsan ee boodhadhku waa USA, Kanada, Australia iyo Jarmal. Goorta iyo sida loo abuuro shaashadda abuurka ee geedo Fareemo maaha mid aad u adag in la koro, sidaa daraadeed waxaa badanaa lagu beeray miraha si deg deg ah oo furan dhulka.
Waxaan ku koraynaa baadiyaha ah ee beerta: xeerarka beeritaanka iyo daryeelka
Buzulnik - cimri dheer, kaas oo dhawaan dhawaan noqday mid caan ah. Warshadu waxay leedahay ubaxyo qurux badan iyo caleemo, waxaa loo adeegsadaa beerashada hal ama koox. Tan iyo dhirta sare (ilaa laba mitir), waxay qurxin kartaa derbiga koritaanka dhismaha ama u adeega sidii shaashad. Doorashada goobta iyo diyaargarowga ciidda Buzulnik ma jecla qoraxda tooska ah, iyada oo ay saameyn ku yeelanayaan ubaxyada, luminta qoyaanka.
Sida loo takhaluso aphids ee dill: hababka kiimikada iyo hababka aan waxyeellada lahayn
Beeralayda badankood way ogyihiin dareenka dhibta marka ay ogaadaan xayawaanka cayayaanka ee macno ahaan ku dhajin dill. Kuwa isku dayay in ay ka takhalusaan dulin, waxay sidoo kale ogtahay sida tani ma aha arrin sahlan. Qodobkani waxa aanu tixgelineynaa hababka ugu habboon ee sida loola tacaalo aphids ee dill. Sababaha aphids ee dill Aphids waxaa lagu qaaday by quraanjo beerta.
Hababka loo bixiyay xakamaynta cudurka dabiiciga ah
Великое множество пословиц и поговорок воспевают пользу моркови. Tan iyo caruurnimadeena, waxaan maqli karnaa sharaxaad ka mid ah khudraddan: "Karootada waxay ku daraan dhiig," "Cuncunka, iyo indhahoodu si fiican u arki doonaan." Qof kasta oo caruurnimadiisii ​​ka maqlaya waalidkood. Karootada waxay jecel yihiin dadka waaweyn iyo carruurta. Waxay ka mid tahay tobanka khudradeed ee miiska saaran.
Chestnut - geed qoyan oo baahsan, badbaadada dhabta ah ee beerta iyo waddooyinka magaalada maalinta kulaylaha kulul. Si kastaba ha ahaatee, chestnut ma aha oo kaliya hooska ka mid ah taajka ballaadhan, taajir ah, laakiin sidoo kale iftiin, caraf udgoon ee ubaxyo jilicsan iyo hawo nadiif ah, nadiif ah. Intaa waxaa dheer, noocyo qaar ka mid ah geedkan waxay leeyihiin dhadhan fiican leh, miraha la cuni karo.
Ka hortagga, habka iyo hababka ula dagaallanka cudurrada iyo cayayaanka ash ashan
Casaan (caadi) waa geed oo leh timirta pyramidal ee foomka saxda ah. Goobta iyo laanta geedka ash buurta ah waxaa lagu daboolaa jilif jilicsan. Heerka dhirta waxaa la gaari karaa 15-16 mitir. Faahfaahinta ash buurtu waxay u qalantaa inay ka bilowdo aagga koritaanka. Waxay ka kooban tahay qaybta yurub ee CIS, iyo sidoo kale dhulalka Caucasus, Siberia, Bariga Fog, Amur, Kazakhstan iyo Kyrgyzstan.
Hababka wax ku oolka ah ee xakamaynta daaqa ee beerta
Bannaanka u badan ayaa xiiso leh sida loo ilaaliyo dabacasaha duqsiyo, sababtoo ah dirxiga ah ee cayayaanka aan fiicnayn ayaa ah khatarta ugu weyn ee xididdada beertaada. Sida loo aqoonsado oo looga takhaluso cayayaankan, waxaan ku sheegi doonaa maqaalkan. Ma taqaanaa? Diyaar garowga waxay jecel yihiin meelo badan oo leh qoyaan badan iyo heerkul dhexdhexaad ah, taas oo keenaysa waxyeelada ugu weyn ee ayan bixinaynin feejignaan ku filan wareega beeraha iyo tiknoolojiga beeraha, iyo roobabka xagaaga oo dheeraa waxay gacan ka geystaan ​​darnaanta ugu badan ee cayayaanka.
Sidee loo dalbadaa ammonia ee beerta iyo beeraha
Ammonia waa walax daaweyn ah oo caan ah oo dhan oo ah xalka aalko ammonia (10%) oo leh ur aad u lihi. Daawada, waxaa loo isticmaalaa in laga baxo suuxdin, u naaquso matag, daaweynta miyuusiska, neuralgia, iwm. Hase ahaatee, beeralayda khibrad leh waxay og yihiin in ammonia loo isticmaalo beerta.
Qudhaanjada aqalka dhirta lagu koriyo: sharaxaadda cayayaanka iyo sida looga takhaluso
Qudhaan aad u adag oo la mid ah si ay u degaan keli keli ah oo kaliya, laakiin sidoo kale beerta, iyo aqalka dhirta lagu koriyo, maadaama ay ka heli karaan cunto badan oo u dhaw beeraha guriga. Si kastaba ha noqotee, tani marwalba maaha kaalmayn deggenayaasha xagaaga, sidaa daraadeed, hoos ayaan u baran doonaa su'aasha ah sida looga takhaluso dhirta ku jirta aqalka dhirta lagu koriyo. Daaraha: sharaxaadda iyo wareegga nolosha ee Cayayaanka cayayaanku waa cayayaanka ku nool kooxaha waaweyn, iyagoo abaabulaya guryo waaweyn, dabiicado.
Xakamaynta waxtarka leh ee cayayaanka dabocase
Roodka ayaa iska leh hore u kordhay khudaarta - muddadii Bisaylkiisa waa 20-40 maalmood. Beerta qaarkeed waxay heystaan ​​wakhti xilliga xiga si ay u ururiyaan laba ama saddex dalag oo dalagga ah. Radish ayaa si dhif ah u saameeya dulin iyo cudurro, laakiin wali way dhacdaa. Macluumaadkani ayaa kaa caawin doona wakhtiga si aad ugu fiirsato dhibaatooyinka sariirtaada iyo ka badbaadi dabocotiga.
Hababka iyo hababka wax looga qabanayo dareeraha baraha
Isaga oo ah caynkaas oo kale ah oo uu abuuro iyo dhibaatooyinka uu abuuri karo ayaa si wacan loo og yahay beeralayda iyo dadka degaanka xagaaga ee qeybta dhexe ee Ruushka, gobollada galbeed ee Caucasus iyo Left-Bank Ukraine. Yaa dareeraha barafka maqaarka - waa jeexan weyn (miisaankiisu waa qiyaastii 700 g, dhererka jirku wuxuu gaari karaa 30 cm). Xayawaanku ma lahayn dabo, dhegaha aan la horumarin, jidhku wuxuu leeyahay qaab cylindrical ah, madaxa waa mid ballaaran, lakulma.
Sida loo codsado "Fitoverm", walaxda firfircoon iyo habka waxqabadka daroogada
Dhamaan beeralayda ku shaqeynaya waxay la kulmaan tiro badan oo cayayaanka, cayayaanka, baabi'inayaan oo keliya dhirta, laakiin sidoo kale beergooyska. Waxaan kugu martiqaadeynaa in aad la tashato wakiil firfircooni firfircoon kaas oo baabi'inaya cayayaanka si xun u saameeya horumarinta beerta. "Fitoderm" waa badeeco asal ah oo ka soo jeeda cayayaanka, acarids, hemoparasites, waxyeelo gaarta khudradda, dhirta miraha, duurka, ubaxyada gudaha iyo dibadda.